Iji Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Google Wepụ Data - Ọkachamara Ụtọ
A ihe ntanetị weebụ bụ ihe akpaaka nke na-anakọta data site saịtị dị iche iche, na-ekwe ka ndị ọrụ njedebe gbanwee ozi achọtara na usoro eji eme ihe. N'ezie, onye nwere ike ịchọta ozi ọ bụla ọ chọrọ na weebụ. Nsogbu bụ iji wepụ data na ụdịdị nke a pụrụ iji ma ọ bụ nyochaa ngwa ngwa.
ngwá ọrụ ntanetị nke Google
Mgbasa ozi Google Chrome bụ ihe nchọgharị weebụ nke na-arụ ọrụ na nchọgharị Chrome. Site na ndọtị a, ọ dịghị mkpa ka ị were ọtụtụ puku ndị enyemaka aka idetuo-wepụ ọdịnaya site na weebụ ogologo ụbọchị dum. Họrọ ihe edere ederede ma ka ihe mgbakwunye Chrome na-eme ihe ndị ọzọ.
Ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke ụmụ amaala na-arụ ọrụ iji jide gọọmentị ha site na nlekota ego ha. Ihe nchịkọta ihe nchọgharị Chrome na-enye ha ohere ịlụ ọgụ maka nghọta na ngosipụta site n'ịchịkọ data ziri ezi gbasara arụmọrụ gọọmentị. Idebe data sitere na weebụ site na iji usoro ntuziaka nwere ike ịbụ ọrụ dị oke egwu. Mee mkpọsa gị na-arụ ọrụ nke ọma site n'ịwụnye ihe ntanetị weebụ na ihe nchọgharị gị.
Olee otú iji wụnye ihe mgbakwunye Chrome?
Mgbakwunye Google chrome scraper bụ ngwá ọrụ ntanetị nke kachasị elu nke a na-enye n'efu na ụlọ ahịa weebụ Chrome.Iji tinye ihe nhicha a na ihe nchọgharị gị, pịa "Tinye na Chrome" nhọrọ a gosipụtara na nrigo aka nri nke nchọgharị Chrome gị. Ozugbo arụnyere, a na-ahụ ngwá ọrụ ugbu a n'okpuru ihe nchọgharị gị.
Olee otu esi eji Google Scraping tool?
Ụfọdụ tebụl data weebụ nwere ike ibufe si na weebụ gaa na teepu nke nwere ike iji mee n'ọdịnihu. Otú ọ dị, ịnweta data sitere na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche na usoro ndị a na-eji eme ihe chọrọ mgbalị ndị ọzọ. N'ime ntụziaka a, tebụl nke United States Securities and Exchange Commission (2015 form 20-F) ga-eji mee ihe iji kọwaa otú mkpokọta mmepụta nke Chrome na ibe weebụ na saịtị.
Iji wepu ngwaọrụ site na iji ngwá ọrụ Google, chọpụta ibe weebụ ka a ga-efopụ. N'okwu a, lekwasị anya na tebụl ahụ. Họrọ ahịrị iji kpochapu ma pịa akara nchapu na akara aka nri n'elu ihe nchọgharị gị wee họrọ "Wepụ ihe yiri nke ahụ. "
Nchọgharị Nchọpụta Chrome ga-ebufe data ndị a kpụpụrụ n'ime windo ọhụrụ. Ntucha gị ga-amata aha aha nke okpokoro a napụtara. Lelee data weghachite iji hụ na e mepụtara ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Pịa "Detuo na desktọọpụ" wee mepee Microsoft Excel gị. Hichaa data n'ime mgbasa ozi gị site na ịpị "Ctrl + V. "
Tupu ị nyochaa ozi dị na spreadsheet gị, dobe ndị isi isiokwu na ebe ha ziri ezi. Hichapụ oghere efu na Microsoft Excel gị iji nweta ezigbo data. Jiri ọrụ Excel kwadoro iji jide n'aka na ego nkwụnye ego na akwụkwọ gị dị mma.
Ngwá ọrụ nchapu Google na-eme ka nchịkọta data nyochaa ka enwekwuo ike ịnweta ya ma kwụ ọtọ. Onye na-ekpuchi ihe na-eme ka nchịkọta weebụ wepụta ya na arụmọrụ na-enye gị ohere ndị ọzọ iji nyochaa njirimara gị. Jiri ntuziaka a tụlere n'elu iji kpochapụ ibe weebụ ma nweta ezigbo data maka nghọta Source .